Ulaxaze umsebenzi wazama nokuzibulala oneziqu zomgunyathi | News24
Ulaxaze umsebenzi wazama nokuzibulala oneziqu zomgunyathi
Durban – Liphuze inqwaba yamaphilisi lizama ukuzibulala iphoyisa lomgwaqo ebelisebenza kuMasipala waseMsunduzi, eMgungundlovu, maphakathi neKwaZulu-Natal.
Leli phoyisa kuthiwa libanjwe ngabaphathi balo ukuthi linesitifiketi sikamatikuletsheni esiwumgunyathi.
ILANGA libike kabanzi emasontweni edlule ngodaba lukaNalenhle Thabi Sabela, obeyiphoyisa lomgwaqo okuvele ukuthi uphuthunyiswe esibhedlela ebanjwe yingcindezi ngemuva kokuvela kwamahlazo okuthi unomatikuletsheni owumgunyathi.
Imithombo yeLANGA engashayi eceleni – engaphakathi emaphoyiseni iveze ukuthi ngemuva kokuhluleka ukuzama ukuzibulala, unqume ukufaka incwadi ephuthumayo yokwesula emsebenzini.
USabela ulahlwe ngelakubo ngesikhathi ezama inhlanhla yokuba anyuselwe kwelinye izinga ngokomsebenzi awenzayo njengoba bekuvele izikhala.
OLUNYE UDABA: Baningi abake bacabange ukuzibulala
Imithombo ithi ngemuva kokubanjwa, ecishe washayeka phansi wahlaselwa wukugula okugcine ngokuthi aphuthunyiswe esibhedlela ngenxa yengcindezi.
Lesi sitifiketi useithenge kuthisha thizeni ngakubo eBulwer, maphakathi neKwaZulu-Natal ngoba enenkinga yokuthi akawuphasanga umatikuletsheni – kanti bekuphume izikhala zemisebenzi edinga abantu abanomatikuletsheni emaphoyiseni.
Indaba kaSabela ibikhulunyelwa phansi emaphaseji lapho abesebenza khona ngoba bonke ozakwabo bebazi ukuthi ufake isicelo sokunyukela kwenye irenki.
ILANGA likhulume namalunga omndeni wakhe zwakalise ukudumala ngesinqumo sendodakazi yawo sokuzama ukuzibulala nokulaxaza umsebenzi ngoba ingafuni ukuveza igama likathisha oyidayisele lesi sitifiketi.
Athi ngemuva kokuba esephumile esibhedlela, abe nomhlangano naye amncenga ukuba aveze lo thisha ukuze ezobhekana nengalo yomthetho.
Imizamo yokuthola uSabela kayiphumelelanga kanjalo neyokuthola iMeya yaseMsunduzi, uThemba Njilo, ukuba aphawule iphunzile njengoba ucingo lwayo belukhala lungabanjwa.